Midowga Musharixiinta oo ka hor yimid habraaca doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharixiinta oo ka hor yimid habraaca doorashada
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa ka soo hor-jeestey habraacii ka soo baxay Golaha Wadatashiga Qaranka ee ahaa doorashada Xildhibaannada Aqalka hoose.
MUQDISHO, Soomaaliya – Golaha Midowga Musharixiinta, ayaa ka hor-yimid qodobo ka mid ah habraacii doorashada ee ay shalay saxiixeen Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Madaxda maamul goboleedyada iyo Guddoomiyaga Gobolka Banaadir.
War-murtiyeed, ka soo baxay Mushrixinta, ayaa lagu yiri, “Goluhu wuxuu si adag u diidayaa habraacii kasoo baxay Golaha Wadarashiga Qaran ee ku aaddan doorashooyinka mudanayaasha Golaha Shacabka, gaar ahaan qoddobada la xariira Oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka, xulista, xaqiijinta, dabagalka iyo diiwaan-gelinta ergooyinka oo dhamaantood gacanta loo geliyay madaxda dowlad goboleedyada”.
Musharixiintu waxa ay war-saxaafadeedkooda ku xuseen, in aysan Golaha Wadatashiga Qaran ka aqbali doonin boobka doorashada oo ay Farmaajo muddada dheer ka hor taagnaayeen.
“Goluhu wuxuu in muddo ah hortaagna isku daygii uu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxmed Cabdulllaahi Farmaajo ku doonayey in uu doorashooyinka dalka ku boobo. Waxaan suuragal ahayn in Golaha Wadatashiga Qaran ay dhaqankii Farmaajo laga diiday u dabamareeyaan.” Ayaa lagu yiri qoraalka mucaaradka.
Waxa ay sheegeen in habraaca doorashooyinku uu khilaafsan yahay Dastuurka iyo heshiiskii 27-kii May, waxayna ka digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shubto oo ay kamid tahay in beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka aamin baxaan doorashada dalka, in nidaamka dowladnimada uu waayo sharciyadda iyo aqoonsiga shacabka, waxgaradka iyo siyaasiyiinta doonaysa dowladnimo sax ah.
Waxa ay soo jeediyeen todobo qodob oo ay u arkaan xalka arrinka ay cabashada ka qabaan, sida in 135 oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan soo xulidda ergooyinka dooranaya xildhibaannada Golaha shacabka.
Waxa ay ku baaqeen in la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo labo jeer xilligeedii hore dib uga dhacday iyo in doorashooyinku ka dhacaan goobo ammaan ah.
Hoos ka aqriso war-murtiyeedka Musharixiinta.